जाडोमा बालवालिकाको विशेष ख्याल गरौं
डा. सुरेश प्रसाद साह
जाडो मौसममा बालबालिका बढी प्रभावित हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा धेरैजसो श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या, झाडापखाला, निमोनिया तथा छाला सुख्खा हुनेजस्ता समस्या देखिन्छ । चिसो मौसममा स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुपर्ने चिकित्सकको भनाइ छ । अधिक चिसोबाट सामान्य फ्लू, ज्वरो, श्वासप्रश्वास, घाँटीको समस्याले सताउने भएकाले जाडोमा शरीरलाई न्यानो राख्न ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जाडोको समयमा नाक बन्द हुने, नाकबाट पानी बग्ने, स्वास फेर्न गाह्रो हुने, रुघाखोकी लाग्ने, घाँटी खसखस हुने, घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने, हाच्छ्युँ बढी आउने, टन्सिल हुनेजस्ता समस्या देखा पर्छन् । मौसम परिवर्तनसँगै बालवालिकाको स्वास्थ्यमा कस्ता समस्याहरू आउँछन् ?, चिसोबाट बालवालिकालाई कसरी जोगाउने ? अन्तर्राष्ट्रिय बालदिवसको अवसर पारेर विराटनगरस्थित न्यूरो कार्डियो एण्ड मल्टिस्पेशलिटी हस्पिटलका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. सुरेशप्रसाद साहसँग हाम्रोमतले गरेको संक्षिप्त कुराकानी:
कोरोना संक्रमणपछि अस्पतालमा बालवालिकाहरूको उपचार कसरी भइरहेको छ ?
– अहिले पनि अस्पताल एक हिसाबले खुल्ला छ । अस्पतालका सबै सेवाहरू सुचारू छन् । ओपिडीमा हामीले विशेष सावधानीहरू अपनाएर बालबालिकाहरूको उपचार गर्दै आएका छौं । कोभिडले गर्दा डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले सचेत भएर बिरामी बालबालिकाहरूको उपचारमा लागि परेका छन् । अहिले कुनै काम पनि रोकिएको छैन ।
– विश्वभरी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड १९ ले सबै उमेर समूहका मानिसलाई सताएको छ । तर, पनि बालवालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम हुने गर्दछ । त्यही भएर अभिभावकले बालबालिकाहरूको हकमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । दुई वर्ष भन्दा मुनिका बच्चाहरूलाई धैरै ख्याल गरिनु पर्दछ । २ वर्षभन्दा मुनिका बच्चालाई माक्सको प्रयोग गरिनु हँुदैन । दुई वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाहरूको हकमा माक्सको प्रयोग गरिनुको साथै साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुन लगाउनु पर्दछ । घरबाट बाहिर हिँड्दा माक्सको प्रयोग र बालवालिकाहरूलाई धैरै भीडभाड भएको ठाउँमा पनि लैजान हँुदैन ।
मौसम परिवर्तनपछि कस्ता विरामी भएका बालवालिका आउने गर्दछन् ?
– जाडोको समयमा बालबालिकाहरूमा देखिने मुख्य समस्या भनेको सामान्य फ्लू र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या हो । जाडो मौसममा बालबालिका बढी प्रभावित हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा धेरैजसो श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या, झाडापखाला, निमोनिया तथा छाला सुख्खा हुनेजस्ता समस्या देखिन्छ । यसैगरी अहिले मौसम परिवर्तनपछि रूघाखोकी, टन्सिललगायतका समस्या भएर बिरामीहरू आउने गर्दछन् । अहिलेको मौसम गर्मीबाट जाडो सुरू भएको छ । यो मौसम परिवर्तनमा बालवालिकाहरूमा बढी भाइरलले सताउने गर्दछ । जाडोको समयमा नाक बन्द हुने, नाकबाट पानी बग्ने, स्वास फेर्न गाह्रो हुने, रुघाखोकी लाग्ने, घाँटी खसखस हुने, घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने, हाच्छ्युँ बढी आउने, टन्सिल हुनेजस्ता समस्या पनि देखा परेका छन् ।
जाडोमा बालवालिकाहरूलाई कसरी जोगाउने ?
– जाडोको समयमा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । तातो लुगा लगाएर बच्चालाई तातो खानेकुरा खुवाउनु पर्छ । सामान्य रुघाखोकी वा ज्वरो आउँदा डाक्टरको सल्लाहविना वा औषधि पसलबाट किनेर बच्चालाई औषधिको सेवन गराइने गरिन्छ । यो गलत हो । डाक्टरको सल्लाहविना बच्चालाई औषधिको सेवन गराउन र अनावश्यक एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्न हुँदैन । ब्याक्टेरियाले गरेको स्वास प्रस्वाससम्बन्धी समस्या हो भनेमात्र एन्टिबायोटिक दिएर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सामान्य भाइरलको संक्रमण भाइरसको कारणले हुने गर्छ । ब्याक्टेरियाले समस्या नगरेको खण्डमा एन्टिबायोटिक दिएर गरिएको उपचारले रोग निको हुँदैन । कोभिडको संक्रमण पनि बढीरहेको बेलामा सामान्य रुघाखोकी वा नाकबाट पानी बग्ने मात्र समस्या छ भने अस्पतालमा आउनुभन्दा पनि घरेलु उपचार पनि प्रभावकारी हुन सक्छ । जाडोको समयमा घरमै न्यानो बनाएर तातो कपडा लगाई, तातो खाना र धेरै झोलिलो पदार्थको सेवन गर्ने, नुनपानीले कुल्ला गर्ने, नाक बन्द भए नाकमा नुनपानी हाल्ने तथा बाफ लिएर मात्र पनि जाडोमा देखिने समस्याको सामाधान गर्न सकिन्छ । बच्चालाई प्रशस्त मात्रामा पोषण तत्वयुक्त सागसब्जी, फलफूल तथा खानेकुराको सेवन गराउनु पर्छ । कमजोर भएपछि निको हुन समय लाग्नुका साथै बच्चालाई अन्य रोग लाग्ने सम्भावना पनि बढ्छ । त्यसैले चिसो लाग्ने खाना तथा फ्रिजमा राखिएका खानेकुराबाहेकका अन्य खाना बारिरहनु पर्दैन । ठूला बच्चालाई कागती, सुन्तलालगायतका भिटामीन सीयुक्त आहारको सेवन गराउनु पर्छ । भिटामिन सीले शरीरमा भएको रोगविरुद्ध लड्ने क्षमताको विकास गर्छ र शरीरमा कुनै प्रकारको रोग पनि लाग्न दिँदैन । यदि ६ महिनाभन्दा कम उमेरका शिशु भएमा आमाको दूधको सेवन गराउने तथा आमाको छातिमा न्यानो हुने गरी टँसाएर राख्नु पर्छ । आमाले बच्चालाई आफ्नो जिउसँग जोडेर राख्दा न्यानो हुन्छ र संक्रमणबाट बचाउन सकिन्छ । सामान्य फ्लूले मात्र सताएमा ६ महिनाभन्दा माथिका बच्चालाई महको सेवन पनि गराउन सकिन्छ । महले नाकबाट बग्ने पानीलाई पातलो बनाएर कफसमेत जम्मा हुन दिँदैन ।
जाडोमा बालवालिकाको छाला सुख्खा हुने गर्दछ । यसबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ ?
– जब हाम्रो शरीरको छाला सुख्खा हुन्छ तब छालासम्बन्धी रोगहरू बल्झिएर आउँछन् । जब बाहिरी वातावरणको तापक्रम हाम्रो शरीरको भन्दा कम हुन्छ तब हाम्रो शरीरको ताप वातावरणले तान्न थाल्छ । यसले गर्दा हाम्रो शरीरबाट पानीको मात्रा छिन्न भइरहेको हुन्छ र छाला सुख्खा हुन्छ । बालबालिकाको छालाको समस्या समाधानमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हरियो सागसब्जीका साथै प्रशस्त पानी पिउनाले सुख्खा छालाको समस्या समाधान हुन्छ । यस्तै छालामा टाँसिने गरी सुती कपडाको प्रयोग गरिने, धरै तातो पानीले सावरबाट सिधै ननुहाउने, एक बाल्टी मनतातो पानीमा दुई चम्चा नुन राखेर नुहाउने गर्नाले छाला सुख्खा हुन पाउँदैन । कडा खालको साबुनको प्रयोग नगर्ने, बेबी लोसन र नरिवलको तेल प्रयोग गर्नाले पनि छाला सुख्खा हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।
बाल दिवसमा बालवालिका र अभिभावलाई केही सुझाब दिनुहुन्छ ?
– बालवालिका भोलीका देशका कर्णधार हुन् । सानो उमेरमा उनीहरूलाई हामीले विशेष ख्याल गरिनु पर्दछ । अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई समय दिनुपर्दछ । सबै तरिकाबाट आफ्नो बच्चालाई स्वास्थ्य राख्न सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दुछ । बालवालिकाहरूलाई सरसफाइमा विशेष ध्यान राखियो भने आधा भन्दा बढी रोक नलाग्ने भएकोले यसतर्फ ध्यान दिन अभिभावकलाई आग्रह गर्दछु ।